आज सुन चाँदीको मूल्य स्थिर ! कति पुग्यो त तोलाको ?
काठमाडौँ : नेपाली बजारमा आज साताको दोश्रो दिन सोमबार सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ९३ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन सोमबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो ।
यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९२ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, चाँदी पनि आइतबारकै मूल्य ११५० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।